Xisbiga FP oo lagu kala jabey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xisbiga FP oo lagu kala jabey
La daabacay torsdag 29 januari 2015 kl 11.43
Hoggaamiyaha xisbiga Shacabka ee afkan iswiidhishka lagu yiraahdo Folkpartiet (FP), Jan Björklund ayaa ka gaabsaday inuu dood kala yeesho xubin xisbiga ka tir-san fikirkii xisbiga ee la xiriiray habka loo hagaajin karo siyaasadda is-dhex-galka, isagoona uu Jan Björklund diiday inuu ka qayb qaato dood fool ka fool ah oo middaa la xiriirta ee idaacadda Svt, laanteeda Aktuellt xalayto fiidnimadii. Hase yeeshee ey Jan Björklund iyo Frida Johansson Metso iyaga oo laba goobood ku kala sugan mid walba uu dhankiisa uga faalloodey fikirka uu soo ban-dhigay hoggaamiyaha xisbiga FP.
Fikirka xisbiga FP ayaa salka ku haya tijaabo luuqadeed oo laga qaado dadyoowga la siineyo dhalashada dalka, in la bixiyo deggenaansho ku meel gaar ah, halka iminka soo-galootiga badankii laga siiyo mid joogto ah iyo weliba in shakhsigu uu masruufi u heli karo reerkiisa kolka la mideeyneyo. Iyadoona lagu macneeyey in fikirrada xisbiga FP ey ka dambeeyaan sidii lloo hagaajin lahaa nidaamka is-dhex-galka.
Hase yeeshee ay Frida Johansson Metso oo ka mid ah xubnaha xisbiga ee fikirradaa ka soo horjeeda in aaney wax faa'iido ah ka tareyn hagaajinta habka is-dhex-galka. Sheegtayna inay aad uga carootay, isla-markaana aaney aheyn siyaasadda dhabta ah ee xisbiga.